Vagadziri & Vatengesi Vanyoro Inotonhorera - China Yakapfava Inotonhorera Factory
Yepamusoro-soro inotakurika isina mvura yakapfava inotonhorera bhegi ine mwero kugona, 840D-TPU zvinhu, makumi maviri emakani ekugona, anokwana kuisa chikafu chaicho, zvinwiwa, michero yaunoda, uye uchiri kunakidzwa neBD-001-41 kwauri mukupisa. kunze Kunakidzwa nechando kwaunounza.
Kunze Mvura Inotakurika Inotakurika Camouflage Inotonhorera Bag
A fashion ice bag ine camouflage chitarisiko, asiwo ine mauto emhando.Shandisa 900D-TPU yakakwirira-inoshanda isingapinde mvura, uye mazino erabha zipi ine yakanakisa kusapinda mvura.Tangi yemukati inogonawo kusapinda mvura.
Yepamusoro-mhando 840TPU zvinhu, zvine mwero kugona, yakakodzera kune dzakasiyana zviitiko.Kunyangwe iwe uri pikiniki, kumisasa kana kungoita barbecue kuseri kwemba, iwe unozoda iri nyore uye rinoshanda ice cooler bag.
Inotonhorera bhegi isingapindi mvura inotonhorera inotonhorera
Yakaoma, isingapindi mvura, isingabvi uye iri nyore kutakura ndiwo maitiro ayo.Inogona kuzadzisa zvinodiwa zvekutakura zvinotonhorera.Kuvhura kwakafara kuri nyore pakutora chikafu, uye iyo yakanyanya kuchengetedza kuchengetedza kuita kwayo kunogona kuchengeta chikafu chiri chitsva kweanosvika maawa makumi manomwe nemaviri.
Yepamusoro Yemhando Yakapfava Yemvura inotonhorera inotonhorera bhegi
Pack yekunze isina mvura ice pack.Iyo isingapinde mvura ye840D-TPU, iyo ine mwero kugona kwemagaba makumi matatu, uye grey inodzivirira muviri.Rega BD-001-36 ice pack ive shamwari yako yakatendeseka yemapikiniki ekunze, kuenda kunze uye kumisasa.